Ndriana Ramamonjy sy “Bruno sy Malala” : Samy nanana ny maha-izy azy · déliremadagascar
Ndriana Ramamonjy sy “Bruno sy Malala” : Samy nanana ny maha-izy azy
Evenement	 21 avril 2021 .
– Bruno dia miara-mihira lalandava amin’ny vadiny, Malala, midera an-kira. Mifameno ny feon’izy mivady: Malala manao feo mitaona misy fihetsempo, toa feo faharoa kanefa feo voalohany, Bruno kosa manao feo midoboka misy fahefana kanefa feno fitiavana. Niara-miasa tamin’ny mpanakanto ara-pilazantsara frantsay izy fahiny raha tany Bordeaux. Misy ireo tononkirany nosoratan’ny Frantsay iray ary fantatr’olona any ivelany hatrany USA.
– Ndriana miavaka amin’ny rindra (accords originaux), hira misy feo mifamaly, ary matetika tsy misy beso [feo telo am-behivavy]. Miavaka koa ny fanononany ny tonony, miala amin’ny mahazatra hita any amin’ny fihirana ankehitriny [rima vaovao]. Ny fitendriny dia manampy amin’ny fahazoana ny hafatra entin’ny hira [tsy misy tralala], ny hafatra mikasika ny fiainana an-davan’andro ary mitaona ny mpihaino hino sy hijoro vavolombelona. Mora hiraina ny hirany.
Hitohy any amin’i Jerosalema Vaovao ny hira fiderana, miaraka amin-dry G.F Haendel, Andrianavoravelona, Ratany, Razafimahefa… Hianatra feo fahatelo aho dieny izao.
One comment on “Ndriana Ramamonjy sy “Bruno sy Malala” : Samy nanana ny maha-izy azy”
Pingback: Ndriana Ramamonjy sy “Bruno sy Malala” : Samy nanana ny maha-izy azy - ewa.mg